Hamro Yatra | » पुस्तक परिचय : सिन्धुलीगढी, वसन्ती र नगेन्द्रराज शर्मा : समग्र आख्यान पुस्तक परिचय : सिन्धुलीगढी, वसन्ती र नगेन्द्रराज शर्मा : समग्र आख्यान – Hamro Yatra
> पुस्तक परिचय : सिन्धुलीगढी, वसन्ती र नगेन्द्रराज शर्मा : समग्र आख्यान
पुस्तक परिचय : सिन्धुलीगढी, वसन्ती र नगेन्द्रराज शर्मा : समग्र आख्यान
बालबालिकालाई कुनै पनि विषयमा जानकारी दिने एउटा सशक्त माध्यम हो, चित्रकथा । त्यसो त कुनै पनि कथावस्तुलाई चित्रकथामा प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ । यो सहज हुन्न । तथापि, सहज र सरल नहुँदा नहुँदै पनि यतातिर सरोकारवालाले ध्यान दिनु आवश्यक भएको छ । किनभने, चित्रकथाले बालबालिकाहरूमा विस्तारै हराउँदै गएको पठन संस्कृतिलाई जिउँदो राख्न मद्दत गर्नेछ ।
नेपालको ऐतिहासिक कथावस्तु समेटेर प्रकाशित चित्रकथाको पुस्तिका हो, ‘सिन्धुलीगढी’ । यसलाई सम्पादन गरेका छन्, प्रा. दिनेशराज पन्त, प्रकाश खडका, दीपक श्रेष्ठ र सौरभ ढकालले । यस सानो पुस्तिकामा कथानुरूप चित्र कोरेका छन्, सुरेश देशारले ।
चित्रकथाका बारेमा पुस्तकमा लेखिएको छ, “प्राचीनकालमा अर्थात् लिच्छविकालमा नेपाल ठूलो थियो । यो अहिलेको जत्रै थियो । नेपाल टुक्रिँदै गएपछि आफ्नो पूर्वमहत्व बिर्सिँदै गई मध्यकालमा यस्तो हुन पुगेको थियो । उपत्यकामा भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं तीन मल्ल राज्य थिए । त्यस समयमा पश्चिममा बाइसे र चौबीसे राज्यहरू थिए ।”
प्रकाशकका तर्फबाट किरण थापाले लेखेका छन्, “…नेपालको इतिहासमा सिन्धुलीगढी युद्धको महत्वपूर्ण स्थान छ । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षाको प्रश्न बनेको सिन्धुलीगढी युद्धमा सिन्धुलीवासीले वीरतापूर्वक लडेका थिए । यो युद्धकथा हाम्रा बालबालिकालाई पढाउन, सुनाउन र बुझाउन आवश्यक छ ।”
कर्मयोगी बद्रीविक्रम थापा स्मृति सेवा गुठीले प्रकाशन गरेको २४+४ पृष्ठको पूर्णतः रंगीन कलेवरको यस चित्रकथाको मूल्य २००– रुपैयाँ राखिएको छ ।
वसन्ती (उपन्यास : डायमनशमशेर राणा)
जति पढे पनि पढूँ–पढूँ लाग्ने उपन्यासमध्येमा पर्छ, ऐतिहासिक उपन्यास ‘वसन्ती’ । डायमनशमशेर राणाको यस उपन्यासको अठारौँ संस्करण हालै प्रकाशनमा आएको छ ।
राणा मुलुकका एक विख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार भएको सबैलाई थाहा छ । उनको ‘सेतो बाघ’ होस् वा ‘सत्प्रयास’, ‘गृहप्रवेश’ होस् वा ‘प्रतिबद्ध’ वा अरू पनि, उनका हरेक उपन्यासले पाठकको मन जितेको छ । प्रा. डा. दीनानाथ ‘शरण’ले उपन्यासको भूमिकामा लेखेका छन्, “…वसन्तीमा मैले उपन्यास मात्र पाइनँ, उपन्यासका पंक्तिहरूका बीचमा नेपाली जीवनको सत्यता पाएको छु । नेपाली जीवनको इमानदार र निर्भीक अभिव्यक्तिका लागि वसन्तीका उपन्यासकारको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।”
उपन्यासको भित्री पृष्ठले भन्छ, “सत्य कुरा त्यहाँ खोल्न नभएकाले जंगबहादुर धर्मसंकटमा परे । यस्तो विपत्तिको घडीमा सच्चाइ सबैभन्दा असल सहारा हो भन्ने उनले सम्झे अनि लाचार भएर साँचो कुरा निवेदन गर्न अग्रसर भए— सरकार ! साँचो कुरा बिन्ती गरूँ भने यो अपराधको मूल कारणी गगनसिंह हुनुहुन्छ । म निर्दोष छु । सबै कुरा उहाँलाई थाहा छ ।”
रत्न पुस्तक भण्डारद्वारा प्रकाशित २२०+४ पृष्ठको यस ऐतिहासिक उपन्यासको मूल्य ३५०– रुपैयाँ राखिएको छ ।
नगेन्द्रराज शर्मा : समग्र आख्यान (उपन्यास/कथासंग्रह : नगेन्द्रराज शर्मा)
साहित्यकार नगेन्द्रराज शर्माको एउटा विशाल परिचय छ, साहित्यिक पत्रकार । बितेको ५० वर्षअघिदेखि ‘अभिव्यक्ति’ द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिकाको प्रकाशन गर्दै आएका शर्मा नेपालको साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । चर्चित छन् । निजी क्षेत्रबाट साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गर्नु र त्यसलाई निरन्तर पाँच दशकसम्म प्रकाशन गर्दै आउनु लरतरो काम होइन । यस दृष्टिबाट ‘अभिव्यक्ति’का नगेन्द्रराज शर्मा र ‘रचना’ साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक रोचक घिमिरेको प्रशंसाका लागि शब्द पुग्दैनन् ।
केही साता अगाडि साहित्यकार एवम् साहित्यिक पत्रकार शर्माको राष्ट्रिय अभिनन्दन गरियो । ८४ वर्ष प्रवेशका अवसरमा साहित्यिक पत्रकारिताका यी व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय अभिनन्दन गरिएकै दिन उनका सबै साहित्यिक रचनाहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रकाशन गरियो, ‘नगेन्द्रराज शर्मा ः समग्र आख्यान’का नामबाट । साहित्यकार रोशन थापा ‘नीरव’को सम्पादनमा प्रकाशित कृतिमा शर्मा लिखित दुई उपन्यास (महापुरुष र दिवास्वप्न) र दुई कथासंग्रह (पीपलको बोटमुनि र एकान्तका आफन्तहरू) संगृहीत छ ।
कृति सम्पादक रोशन थापा ‘नीरव’ सम्पादकीयमा लेख्छन्, “आख्यानकार नगेन्द्रराज शर्माको उपन्यास लेखनमा जति सशक्त उपन्यासकार छवि ती दुई उपन्यास पठन गरेपछि हामी पाउँदछौँ, त्यतिकै सबल कथाकार छवि उनका दुई कथासंग्रहको कथालेखन शैलीमा देख्न सक्छौँ । भन्नाको अर्थ हो, उपन्यासकार छवि र कथाकार रूपमा कुनै एक पनि कमजोर छैन । दुवै छवि उत्तिकै प्रबल देखिन्छ ।…”
शर्माको एउटा कथाले भन्छ, “मैले मुस्कान बेचेकोमा तिमीलाई एउटा कथा फुर्यो । तर, तिमीजस्तै मेरा कैयौँ दाजुहरूले आफ्नो आत्मै बेचेको, अस्तित्वै बेचेकोमा खोइ कतिवटा कथा लेख्यौ ? साहित्यकारले आफूलाई बेचेर कसैको स्तुति लेख्छ– मौका पाउने कर्मचारीले आफूलाई बेचेर चार पैसा घुस खान्छ । म त तिमीहरूभन्दा धेरै चोखी छु ।” उपलब्धि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, साहित्य विकास उपसमितिद्वारा प्रकाशित ३२८+४ पृष्ठको यस कृतिको मूल्य ३५०– रुपैयाँ राखिएको छ ।